31 Astaamaha Bilaashka ah ee Xilligan Jira ee magacyadooda ku leh muuqaalada | Abuurista khadka tooska ah
Waan raacnaa helitaanka noocyo cusub oo bilaash ah taas oo noo adeegaysa inaan taabashadaas gaarka ah u dhigno boggeena internetka, eCommerce ama blog, oo markaa aan awoodno inaan ka soo kacno inta kale ama, ugu yaraan, soo jiito dareenka soo booqdaha ka soo dhacay mashiinka raadinta Google markii la isticmaalayo erayga muhiimka ah.
Waxaan soo ururin doonaa 31 noocyada ugu fiican ee bilaashka ah ee hadda socda kaas oo si gaar ah ugu imanaya nashqadeeyayaasha nooc kasta. Taxane taxane tayo sare leh oo u qalma waxa loogu yeedho bilaash taas oo noo ogolaanaysa inaanu muujino shaqadeena webka. Aan ku gaadhno 31-kaas nooc ee bilaashka ah.
1 Qoraalka Imaaraatka
3 WADE Waffle
6 Taxadir la'aan
9 Cowboys aad u tiro badan
11 Xayawaanka Duurjoogta ah
12 Xiga Art
16 Dharka Zilla
20 WAQTI WAYN
Ilaha loo isticmaalo shakhsi ahaaneed, liisanka waa inaad ku dhex martaa sanduuqa, iyo taas waxaa lagu gartaa kuwa qaababka qalooca qaabka gacanta lagu sameeyo ee aadka u soo jiita alaabada.
Noocani waa warqad furan oo shati leh, markaa waxaad u isticmaali kartaa wax alla wixii aad rabto. Waxaa abuuray Mike Abbink iyo Bold Monday oo loogu talagalay aqoonsiga cusub ee shirkadda IBM ee 2017.
Ilo kale oo loogu talagalay isticmaalka ganacsiga bilaashka ah taasna waxay leedahay xiriir gaar ah oo leh wax walba waa inuu ku sameeyaa dubista iyo jikada. Waxay ka kooban tahay laba ilood.
Aad u font xarrago inaad si bilaash ah ugu haysato adeegsi ganacsi iyo mid shaqsi labadaba noocyadiisa caadiga ah iyo kuwa madow.
Font kale oo bilaash ah oo loogu talagalay isticmaalka ganacsiga taas ayaa si muuqata uga dhex muuqda liiskan oo ka kooban 31 nooc.
Waxaan la harnay hamiga ah inaan awoodin inaan marin u helno isticmaalkeeda ganacsi ee bilaashka ah a qoraal yar oo caasi ah kana duwan kuwa kale.
Font loo isticmaalo shakhsi ahaaneed taas wuxuu leeyahay astaamaha Waqooyiga Yurub. Ku dhufashada shaki la'aan sifooyinka astaamaha iyo in si fiican looga soocan yahay inta kale.
Font bilaash ah oo loogu talagalay isticmaalka shakhsi ahaaneed ee ka dhigaysa xiriiriye aad u qaas ah dhammaan mawduuca mawduucyada ee bog ama bog taas wuxuu la xiriiraa dabeecadda.
Cowboys aad u tiro badan
Una farta indhaha qabata ee loogu talagalay isticmaalka ganacsiga oo shaqsi ahaaneed in daqiiqadda ugu horreysa ay noo horseedayso wax aad u Maraykan ah
Una font hal abuur leh adeegsi shaqsiyeed oo ku faana inuu yahay 'art deco'.
3 nooc oo loogu talagalay font bilaash ah adeegsi shaqsi ah oo raadinaya dhinacaas duurjoogta ah iyo madaddaalada ku jira cinwaan qoraal ah.
Nooc xarrago leh oo leh xirfad badan oo farshaxanimo ah taasi cidna dan uma aha. Haa, waad u adeegsan kartaa wax ganacsi ah, ee horay u soco.
Qoraagu wuxuu ku andacooday inay tani tahay xarig-dhalaal bilaash ah, oo taas macnaheedu yahay tirooyinka u rogo muuqaalada xogta.
Waa il u horseeda xarrago ahaan erayga sirta ah. Khasaaraha kaliya ee jira ayaa ah inaad u isticmaali doonto wax shaqsiyeed.
Nooc ka mid ah sansaf serif ah oo loogu talagalay adeegsiga ganacsiga ee Google Fonts. Waxay leedahay geesinimo inay sidato toddobo kala duwanaansho aniga oo wata si aad ugu isticmaali karto ujeeddo kasta.
Tani isha waa Mozilla ugu weyn, in sanad kahor ay badashay astaanteeda, waxaana loo isticmaalaa isku xidhka ugu weyn ee adeegyadiisu bixiyaan sida bartaada internetka ama biraawsarkaaga.
Sida Mozilla oo kale bilaash u ah isticmaalka ganacsiga taasi waxay leedahay kala duwanaansho ku filan si qaarkood ay ugu habboonaadaan baahiyahaaga.
Ilo aad Brittish iyo Anglo-Saxon oo loo adeegsan karo dhammaan noocyada ujeeddooyinka. Kaliya bilaash isticmaalka shakhsi ahaaneed.
Nooca qaab shaqsiyeed sida haddii aan nahay gacanta wax ku qoro leh kala sooc weyn.
Shatiga isticmaalka shaqsiyeed ee waa il biyo diid ah oo ka kooban laba nooc. Ilo kale oo si dhow ula xiriirta gastronomy.
Ilo cusub oo leh Qiimaha weyn ee isku dhafka fikradaha joomatari labadaba sida jilicsan ee ka mid noqda kuwa ku mahadsan liiskan. Ganacsi iyo adeegsi shakhsiyeed oo bilaash ah.
Font bilaash ah oo loogu talagalay isticmaalka shakhsi ahaaneed oo leh a motifomikada caloosha oo aad u muuqata. Haddii aad rabto inaad u isticmaasho ganacsi, waa inaad la xiriirtaa qoraaga.
Ganacsi bilaash ah in la isticmaalo, markaa waad leedahay gacanta gacanta farta ah si loo abuuro madax qurux badan iyo naqshado astaan.
Nooca caday foomka bilaashka ah ee ganacsiga / isticmaalka shaqsiga ah. wuxuu leeyahay sida faahfaahsan in waxaa loogu talagalay akhriska fudud ilaa qiyaaso dhexdhexaad ah.
Font gaar ah Shaki la’aan shakhsiyan u isticmaal.
Xaraf ganacsi / shakhsi oo bilaash ah oo leh hawo aan daryeel lahayn aad u soo jiidasho leh.
Nooc qoraal ah aad u fiican oo minimalist sans serif dhammaan noocyada shaqooyinka. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan liiska. Isticmaal shakhsiyeed iyo ganacsi oo bilaash ah.
Iyadoo a noocyo badan oo kaladuwan, wuxuu awood u leeyahay inuu daboolo illaa 40 luqadood oo adeegsada xuruufta Laatiinka. Aad ayaa loo tixgeliyaa waana kan ugu fiican labadan sano ee la soo dhaafay.
Waa il qaboojis leh maanta markay waxaan isticmaalnaa aaladaha mobilka saacadaha oo dhan. Ganacsi iyo adeegsi shakhsiyeed oo bilaash ah.
Iyada oo ku saleysan cinwaanka cinwaanka cinwaanka Café Metropole by Taleex Wacaan Aad u soo jiidasho leh oo bilaash ah adeegsi shakhsiyeed iyo ganacsi.
Waxay leedahay taabasho taariikhi ah xarrago iyo liidasho yar Taasi waxay uga tagaysaa meel aad u mudnaan badan dhammaan kuwa ku jira liistadaan. Liisanka bilaashka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Xarafyada ugu waaweyn ee 31 Fonts Xilligan loogu talagalay Naqshadayaasha
Mahadsanid sxb wanaagsan .. !! Runtii waad iga caawisay ilahaas, waan ku qanacsanahay
Waa lagugu soo dhaweynayaa Oswaldo! Salaan.
Wax ku biirinta wanaagsan ayaa la mahadiyey.
Sawirada soo jiidashada leh ee Chernobyl oo lagu qaaday kamarad infrared ah